Muuqaalka Suuq-geynta Dijital ah | Martech Zone
Muuqaalka Suuq-geynta Dijital ah
Talaado, Janaayo 8, 2019 Isniin, Janaayo 7, 2019 Douglas Karr
2019 ayaa ku sii dhowaaneysa iyo isbeddelka joogtada ah ee muuqaalka xayeysiinta ayaa sii wadaya inuu beddelo sida aan u sameyno xayeysiinta dhijitaalka ah. Waxaan horey u daawanay qaar ka mid ah isbeddelada cusub ee dhijitaalka ah, laakiin sida ku xusan tirakoobyada, in ka yar 20% ee ganacsiyada ayaa hirgeliyay isbeddello cusub oo ku saabsan istiraatiijiyaddooda xayeysiinta dhijitaalka ah ee 2018. Faсt-kan ayaa sababa muran: waxaan daawaneynaa isbeddellada cusub ee rajeynaya inay hirar ka yeeshaan sanadka soo socda, laakiin sida caadiga ah, ku dhaji dariiqii hore.
2019 waxay noqon kartaa sanadka la keeno caadooyinka cusub ee xayeysiinta dhijitaalka ah. Wixii sanadkii hore ka shaqeeyey dijital Kuwa doonaya inay helaan muuqaalka guud ee isbeddelka, kooxda Epom Market waxay si qoto dheer u dhex galeen isbeddelada xayeysiinta dhijitaalka ah waxayna heleen muuqaalka guud ee isbeddellada aan ku arki doonno 2019.
Waxyaalaha Muhiimka ah ee Xayeysiinta:
Haddii aadan wali u leexin miisaaniyadaada suuqgeynta barnaamijka wax iibsiga ee barnaamijka, 2019 waa fursadii ugu dambeysay ee aad taas ku sameyso.
Kuwa aan iibsan taraafikada si nidaam ahaan ah waxay sii wadi doonaan luminta lacagta iyagoo lacag dheeraad ah ku bixinaya dareenka iyo beddelaadda.
Suuqa dhijitaalka ah wuxuu u socdaa hufnaan buuxda iyo iswaafajin (kaliya fiiri sida DSPs ay isu beddeleen sanadkii la soo dhaafay).
Xayeysiinta Fiidiyowga ayaa joojisay inay ahaato qaab xayeysiis qiimo leh - maanta waa qaab loo adeegsado xayeysiinta si loo wado kaqeybgalka ugu badan uguna dir fariintaada dhagaystayaal ballaaran.
Mobileku wuxuu helayaa xitaa qayb aad u ballaaran oo ah keegga dijitaalka ah, sidaas darteed shaashadda moobiilku waxay sii ahaan doontaa habka ugu wax ku oolka badan ee lagu dhufto dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato.
Tags: 2019xayeysiiska ku biximuuqaalka xayaysiintaMuuqaalka Muuqaalka Dijitaalka Dijitaalka ahinfographicxayeesiinta mobilebarnaamijkadoollarka xayeysiiska ah
Kudar Xayeysiin Iib ah Goobtaada Ecommerce